Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds 2.3.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 25 - 50
ဗားရွင္း 2.3.0 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds
Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Are you getting tired of daily routines and want relief? Come and get the free guided meditation app, Peace. It providesavast database of masters' meditation courses for starters as well as advanced meditators. You can easily get to relax, sleep and focus. Need to remove your headspace? Need to be more productive? Got into trouble with insomnia? Just download and meditate now, you’ll get access toawhole new world. Our dream is to make MEDITATION becomealife charger for everyone.
- 200+ meditation courses (will keep updating)
- Guided meditation audios with dulcet voice
- Various specific topics and targeted courses which can be chosen based on your mood
- Mindfulness skills such as Visualization and Body-Scan
- White noise mode
- Relax yourself
- Find inner-peace
- Improve your concentration
- Improve your productivity
- Bring mindfulness meditation into your daily life
- Drive away loneliness
- Drive away insomnia and sleep better
- Enhance the relationship with your families and friends
- Getahealthier lifestyle
In order to settle different situations in our life, we’ve designedadiversity of courses.
- Basic (for starters, 25 sessions in total)
- Healing (including Anxiety, Guilt, Broken Heart, Stress, Depression and Pain)
- Balance (including Eating and Grounding)
- Health (including Relaxation, Focus, Fatigue and Sleep)
- Happiness (including Peace, Gratitude and Motivation)
- Relationships (including Anger, Couples and Forgiveness)
- Everywhere (including Commuting, Cooking, Riding, Walking and Takingabreak)
- SOS (including Burned Out, Frustrated, Losing Temper, Broken Heart and Restore)
- Daily (including Wake Up, Sleep and Review the day)
- Powerful Nap
Join us on making MEDITATION becomealife charger for everyone! Sounds attractive? Come to Peace Meditation app, you’ll haveachance to experience high-quality meditations now.
We are expecting to know your opinions on it so that we can provide you with more satisfying services.
Facebook Page: https://www.facebook.com/PeaceMeditationAPP/
သငျသညျနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ငြီးငွေ့လာပြီနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးချင်ပါသလား? အခမဲ့ပဲ့ထိန်းဘာဝနာ app ကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆု လာ. မရ။ ဒါဟာင်ဘို့သခင် '' ဘာဝနာသင်တန်းများ၏ကျယ်ပြန့်ဒေတာဘေ့စအဖြစ်အဆင့်မြင့်တရားအားထုတ်သည်။ သင်အလွယ်တကူ, အနားယူအိပ်စက်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှရနိုင်တယ်။ သင့်ရဲ့ headspace ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသလား? ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်? အိပ်မပျော်နှင့်အတူဒုက္ခသို့ရှိသလား? သငျသညျတစျခုလုံးကမ္ဘာသစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်, ရုံကို download လုပ်ပါနှင့်ယခုတွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်ဘာဝနာလူတိုင်းအတွက်ဘဝ charger ကိုဖြစ်လာပါစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
- 200+ ဘာဝနာသင်တန်းများ (မွမ်းမံစောင့်ရှောက်မည်)
- dulcet အသံနှင့်ပဲ့ထိန်းဘာဝနာအသံဖိုင်များ
- ထိုသို့သော Visual နှင့်ခန္ဓာကိုယ်-Scan ကိုအဖြစ်စိတ်ထဲကျွမ်းကျင်မှု
- အဖြူရောင်ဆူညံသံ mode ကို
- သင့်မိသားစုများနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆက်ဆံရေး Enhance
- အခြေခံပညာ (စတင်ဘို့, စုစုပေါင်း 25 ဦးအစည်းအဝေးများ)
- (ပူပန်အပြစ်ရှိတယ် Broken နှလုံး, စိတ်ဖိစီးမှု, Depression နဲ့နာကျင်မှုအပါအဝင်) ကုသမှု
- (စားနှင့်မြေပြင်အပါအဝင်) Balance
- (အပန်းဖြေ, အာရုံစိုက်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအပါအဝင်) ကနျြးမာရေး
- (ငွိမျးခမျြးရေး, ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် Motivation အပါအဝင်) ပျော်ရွှင်မှု
- (ဒေါသ, စုံတွဲများနှင့်ခွင့်လွှတ်အပါအဝင်) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
- နေရာတိုင်းမှာ (စီး Walking နှင့်တစ်ဦးချိုးယူခြင်း, အသွားအပြန်, ဟင်းချက်အပါအဝင်)
- အရေးပေါ် (ထဲကကိုမီးရှို့အပါအဝင်စိတ်ပျက်, ဆုံးရှုံးဒေါသ, Broken Heart ကနှင့် Restore)
- (ဝိတ် Up ကိုအပါအဝင်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်နေ့ရက်ကိုပြန်သုံးသပ်ပါ) Daily သတင်းစာ
- Mini ကို
- အစွမ်းထက် NAP
ဘာဝနာလူတိုင်းအတွက်ဘဝ charger ကိုဖြစ်လာအောင်ကို Join! ဆွဲဆောင်မှုအသံ? သငျသညျယခုအရည်အသွေးမြင့်ဆင်ခြင်တွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်လိမ့်မယ်, ငြိမ်းချမ်းရေးတှေးတောဆငျခွ app ကိုထံသို့လာကြ၏။
Facebook ကစာမျက်နှာ: https://www.facebook.com/PeaceMeditationAPP/
E-mail ကို: peace@dailyinnovation.biz
Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds အား အခ်က္ျပပါ
worldnull စတိုး 593 201.05k
Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.3.0
ထုတ်လုပ်သူ Sandbox Coloring,Number Coloring by Coloring Team
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://peace.dailyinnovation.biz/privacy.html
App Name: Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds
Release date: 2018-12-20 20:19:49
လက်မှတ် SHA1: 3D:26:F6:ED:DD:51:DA:56:8D:7A:48:09:98:76:08:88:55:63:9C:4A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): John Li
Peace: Sleep Meditation, Aura, Relaxing Sounds APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ